महिलाले दिनहुँ हस्तमैथुन गर्दा के–कस्तो असर पर्छ ? महिलाले कसरी हस्तमैथुन गर्छन् ? « Light Nepal
महिलाले दिनहुँ हस्तमैथुन गर्दा के–कस्तो असर पर्छ ? महिलाले कसरी हस्तमैथुन गर्छन् ?
लाइट नेपाल हाम्रो समाजका धेरैजसो मानिसले महिलाहरू हस्तमैथुन गर्दैनन् भन्ने मान्छन्, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । महिलाहरूले पनि हस्तमैथुन गर्छन् । एक अध्ययनअनुसार ८२ प्रतिशत महिलाले हस्तमैथुन गरेको अनुभव भएको बताएका छन् ।
सामान्यत: यौनेच्छा पूरा भएपछि थप यौनसम्पर्क वा हस्तमैथुन गर्न सकिँदैन । आफ्नो दैनिक जीवनलाई नै असर पार्ने गरी लत बसेको छ भनेचाहिँ चिकित्सकको मद्दत लिनुपर्छ ।